Asa fitantanana ao Dubai C-Level tsy ho an'ny Expats ihany
Enga anie 6, 2018
Dubai bilaogera ho an'ny vondrona vaovao ao Dubai
Asa fitantanana any Dubai
Ny asa fitantanana any Dubai dia tsy ho an'ny fikambanana ihany. Ny orinasan-tanànan'i Dubai amin'izao fotoana izao manampy ireo mpitantana halefa any UAE. Ny ekipanay dia nitantana ny torolàlana rehetra ho an'ny asa any Dubai ho an'ny mpitantana. Indrindra ho an'ny mpitantana mpitantana ambony. Noho izany raha mitady asa tonga lafatra ianao ao amin'ny United Arab Emirates. Jereo ny torohevitra vitsivitsy, ary fantaro hoe aiza no toerana tsara indrindra noho ny fitadiavana asa nofinofy any ivelany.
Nosoratanay ny asa tsara indrindra azonao atao any UAE. Ary mazava ho azy, ny tsara indrindra dia CEO na asa fitantanana Senior Management. Ary ny mpitari-draharahan'ny orinasa dia manaparitaka ny fomba hahazoana izany karazana asa atolotra izany. Etsy ankilany, karazana asa inona izany?. Ary ahoana ny fomba fitantanana saina tonga lafatra amin'ireo tolotra omena ireo ?. Ny Dubai City Company dia manampy ireo mpikaroka vaovao. Fa maninona no tsy mamaky ny torolalantsika. Afaka mahita orinasa tsara etsy ambany ianao. Manana asa tsara izy ireo any Dubai sy ny firenena Golfa.
Ny orinasanay dia mijery matetika amin'ny manampy anao ho lasa mpitantana senior any UAE. Amin'ny lafiny iray, manampy ny mpifindra monina izahay amin'ny fahazoana asa haingana kokoa izay noeritreretiny. Amin'ity torolàlana ity dia hataonao izay mahita vaovao tsara momba ny fandraisana mpiasa. Amin'izao fotoana izao dia ny firenena Afovoany Atsinanana sy Golfa toerana ho an'ny mpikaroka asa. Indrindra miaraka amin'ny lehiben'ny fanabeazana tsara amin'ny MBA sy ny fanabeazana momba ny fitantanana orinasa. Ka mba mizaha jereo eto ambany, inona azonao atao ny mitari-dalana anay.
Tetikasa CEO ao Dubai
Ny hanana toerana ambony kokoa kokoa ?. Ny toeran'ny CEO moa dia faniriana, tsy asa. Azo antoka fa fifanakalozan-dresaka io mba ho mpitantana ambony na tsia ?. Ny ankamaroan'ny mpitantana dia eo amin'ny ambaratonga antonony manapa-kevitra hanohy ny asa any amin'ny toerana ambony ny mpitantanaL. Ny Asa CEO dia tsara ho an'ny olona manana fanabeazana MBA ary ho an'ireo izay manana PhD. Noho ireo orinasa lehibe na orinasa madinika. Mazava ho azy fa samy manana CEO avokoa izy ireo. Noho izany, orinasa midadasika ny orinasa midadasika miandrandra ny mpiasa mpitantana ambony kokoa. Tsy misy an'izao tontolo izao ny marina ao amin'ity bilaogy Dubai ity, ary tsy mahalala mihitsy hoe iza no ho mpitarika tsara indrindra.
Ohatra, fikarohana maromaro any Moyen-Orient no manao fikarohana ary Manara-maso ny salanisan'ny CEO ao Dubai. Tsara kokoa ve ny karama lehibe kokoa ?. Mazava ho azy fa satria efa azo atao ny miady hevitra amin'ny fotoana hanapahanao hevitra ny hanao asa any amin'ny orinasa lehibe na amin'ny fikambanana kely na antitra. Ny asa amin'ny sehatry ny CEO dia sarotra ny manatratra, latsaky ny 5% an'ny olona mitantana mba hahavita an'izany.
Tsy misy ny fahamarinana manerantany momba ny toerana misy ny CEO. Ary misy tombony sy tsy fitoviana amin'ny safidy avy amin'ny mpiasa mpitsabo mpanampy hatramin'ny taona ambony. Ora ora fiasana, manokana ara-batana ary takiana ara-tsosialy takiana. Ka tsy ny olona rehetra no afaka miandraikitra mpitantana ambony. Indrindra raha tsy izy ireo manana taratasy fanoratana mazava tsara. Misy herim-po sy filana ilaina amin'io toerana miavaka io. Ny ankamaroan'ny olona dia manakatra ny haavon'ilay mpiandraikitra.
Nahoana no miasa any Dubai?
Tsia ny asa fitantanana xNUMX ao Dubai ny positives
Ny asa fitantanana, amin'ny zava-misy marina, dia ankamaroan'ny orinasa lehibe avy any Abu Dhabi mankany Dubai. Ary ny antony dia ny ankamaroan'izy ireo. Amin'ny alalan'ny fahombiazana sy ny fitomboan'ny fitomboan'ny mpiasa, Nahazo asa ho mpitantana ambony. Ary miaraka amin'io orinasa madinika io dia lasa lehibe kokoa ny fotoana. Ary avy eo ny mpitantana dia miavaka tombony sy tombontsoa amin'ny tsenan'ny asa fiarovana.
Ny orinasan-tanànan'i Dubai manana antsipiriany torolàlana ho an'ny fandefasana Alzeriana. Nametraka valiny vitsivitsy izahay mba handinihana ny fikatsahana ny asan'ny mpitantana eo amin'ny toeran'ny mpiandraikitra zokiolona. Ny fiantraikany lehibe indrindra amin'ny asa fitantanana any Dubai dia Manana traikefa ambony ambony. Azonao ampiasaina izany ny fanandramanao tsara amin'ny asa fitadiavana asa.
Ny tsara indrindra amin'ny asa fitantanana any Dubai dia karama tsara. Ary ny maro amin'ireo fianarana tsara sy Tsara marihina ny marika manokana ho toy ny mpizaha tany. Noho izany, raha mitady an'io karazana asa io ianao dia tokony ho afaka mahazo bonus be. Amin'ny maha Tale Jeneraly azy, hahita asa maharitra be ianao nefa afaka mitantana fifandraisana tsara. Avy amin'ny asa fototra banga toy hotel career hatramin'ny MBA eny amin'ny UAE. Izy rehetra dia ho afaka hitantana ny tale ao Afovoany Atsinanana.
Ny laharam-pahefan'ny 2 ho mpitantana ao Dubai
Maniditra orinasa lehibe ho an'ny asa fitantanana, ohatra, Airport miasa ao Abu Dhabi sy Dubai. Mazava ho azy fa toy ny fandraisana anjara amin'ny milina fiasana goavana izay nanamafy ny fitsapana ny fotoana. Raha ny marina mba hahazoana asa fitantanana ao Dubai. Ho ela velona izany. Noho izany antony izany, ny ekipantsika dia manana mitarika mpitsoa-ponenana vaovao. Ny ankamaroan'ny asa momba ny fitantanam-bolam-panjakana dia matetika no efa hatry ny ela.
Mba ho lasa mpitantana ao Dubai. Tokony hahatratra ny sasantsasany amin'ny fitsipi-pitondran-tena ianao. Ary ny zavatra ahafahanao mahafantatra tsara ny asanao, Ahoana no ahafahanao mianatra asa ao amin'ny departemantanao? ary ny lalana miharihary ho an'ny fampiroboroboana ary mananganana raha vantany vao miditra ny varavarana ianao. Na dia tsy toy ny lalan-kizorana ho an'ny rehetra aza io karazana trano io, raha mitady asa miaraka amin'ny fahatsapana ny fahamendrehana, ny lalana mazava sy voafaritra tsara amin'ny fandrosoana, avy eo orinasa lehibe Ataovy ao anaty lavaka izany.
Ankoatra izany, Vehivavy no mahita asa any Dubai izao. Na inona na inona fomba fiainanao. Hanana safidy lehibe ianao mahita asa any Afovoany Atsinanana.
Tsia ny tombontsoa azo avy amin'ny famatsiam-bola amin'ny UAE
Amin'ny ankapobeny, ny tontolon'ny orinasa lehibe kokoa dia mitaky manangom-bola ho an'ny fampiasam-bola. Noho izany dia misy fahafahana goavana ho an'ny mpanatanteraka vaovao eo amin'ny sehatra afovoany. Ny fototra tombony ho lasa mpitantana any UAE dia fisehoana iraisam-pirenena. Satria ny orinasa iraisam-pirenena tsara kokoa dia manome tombony toy ny fiantohana ara-pahasalamana. Be lavitra sy mahaliana anatiny fanofanana olona vaovao.
Amin'ny maha-mpitantana ambony anao, ianao dia mahazo alalana fitaterana entana na Uber. Mihoatra noho ny teti-bola fampiofanana, ary tombontsoa maro hafa. Izany dia satria orinasa lehibe no manana fidiram-bola lehibe noho ny orinasa madinika. Noho izany, ao an-tsaina, orinasa manao azy io mora kokoa amin'ny mpiasa vaovao mba ho mpanara-maso. Etsy andaniny, tsy mila mandoa vola ianao mitombo ny fonosana tombony.
Mazava ho azy fa zava-dehibe io raha manomboka manararaotra ny toerana misy anao ianao. Misy be ny misy tombontsoa ho an'ny mpitantana banky any UAE. Na inona na inona orinasa sy ny toerana na ivelany na anatiny ianao dia hiafara ao ny fiainanao ho an'ny C-level jobs. Tokony ho tsaroantsika fa ny mpitantana ao amin'ny UAE. Azo antoka fa mahita asa any amin'ny toerana hafa, ohatra, Saudi Arabia, ary Qatar. Ka hatramin'ny naha-mpanatanteraka anao tany Dubai na Abu Dhabi ianao. The hisokatra izao tontolo izao ho anao.
Tsia .4 Fomba bebe kokoa ho an'ny fanovana fanofanana
Na dia mety ho orinasa manokana ao anaty orinasa lehibe aza ny anjara asanao. Mitady asa ho Tale Jeneralin'ny Tale dia mety haka fotoana. Raha ny tena izy dia mora kokoa ny manova ny toerany amin'ny ambaratonga fitantanana. Amin'ny lafiny iray, ny ankamaroan'ny mpitantana eo afovoany dia mijery mandinika faritra vaovao nefa tsy mandao tanteraka ny orinasa. Raha izany no ao an-tsaina, amin'ny maha mpiasa anao dia hahazo be lavitra kokoa ianao mety hisian'ny fanovana asa.
To become a PDG, afaka manalavitra ny maha-mpanatanteraky ny varotra anao ianao amin'ny maha mpitantana ny tetikasa, avy eo dia ny fandidiana tale ary mahatratra ny làlam-pahefana C- Level. Na dia afaka manomboka toy ny mpanakanto ianao ary mitsangana miasa ho mpandraharaha ambony. Mety mbola mila mihaza kely fotsiny ianao raha hiova asa. Ary miasa mafy ho an'ny toerana ambany kokoa mandritra ny taona maro.
Satria mendrika ny fanovana asa tianao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia manodidina 10 farafahakeliny mety hahatratrarana. Fa tena manampy koa raha efa miasa tsara ianao raha miasa tsara. Mihoatra ny fampiroboroboana ny fitantanana jobs in Dubai. Izany no zavatra iray tsy maintsy atahoran'ny tompon'andraikitra tsara indrindra. Amin'ny lafiny iray, ny asa fitantanana any Dubai dia tsy mihoatra ny adidy tsotra fotsiny.
Tsindrio ny orinasa NewX and New Startup
Niasa tamina orinasa lehibe tsy ny masoandro sy ny orana rehetra. Na izany aza, miasa ho an'ny orinasa mpanomboka manana tombony manokana. Ohatra, satria mandroso ny orinasa Dubai avy amina toerana fanombohana mankany amin'ny orinasa tsara. Hanana fifehezana tanteraka ianao amin'ny maha-mpanantanteraka ny fivoaran'ny orinasa. Inona ny fivoaran'ny departemanta tsirairay? Ary na betsaka aza ny tanjonao dia manao isam-bolana.
Na dia mety halaim-panahy aza ianao miditra ao amin'ny orinasa lehibe iray. Tokony hoheverinao ireo orinasa kely ireo. Na na fikambanana startup na orinasa orinasa mpamatsy vola hamatsy vola aza. Ny orinasa tsara indrindra noho ny fahazoana asa amin'ny orinasa Startup amin'ny maha-manager dia Angel.co. Ity orinasa ity dia manerantany manerana izao tontolo izao !.
Tsia dia niova tsikelikely ny fiovana C-Level
Manantena ny ho tonga mpanatanteraka C-Level ?. Miasa ho an'ny orinasa goavana iray ny tsara. Amin'ny lafiny ratsy, avy amin'ny ambaratonga afovoany mankany C-level dia lavitra. Satria ho an'ny mpanatanteraka C-Level Fohy ny fiovana. Mila manam-paharetana ianao, misy ny fanapahan-kevitra sasantsasany amin'ny 3 Taona. Na dia any amin'ny orinasa sasany any Dubai. Mbola lavitra izany mialoha ny fandefasana mpiasa na mpiasa eo an-toerana hanombohana eo amin'ny sehatry ny fitantanana ao Emirà Arabo Mitambatra.
Na dia ny orinasa vaovao hiasa dia misokatra amin'ny hevitra vaovao. Na izany aza, mila manana tanjona lavitra ianao. Very fandrosoana tsara asa ary ny fahombiazan'ny departemantan'ny talen'ny HR dia mandroso amin'ny modely hafa. Ary araho ny mitondra anao amin'ny paikady vaovao. Ary manova ny toeranao ho an'ny C-Level ambony, fanavaozana vaovao ho an'ny toerana vaovao dia mety haka fotoana be. Maro amin'ireo mpitsoa-ponenana vaovao any Emirà Arabo Mitambatra dia maniry ny handao ny marika eo amin'ny orinasa. Saingy maka fotoana be dia be izy ireo, miasa ho an'ny 5 farafahakeliny hatramin'ny taona 7.
Na izany aza, ity manitsy mahitsy kokoa ary mora kokoa ho an'ny orinasa kely noho ny lehibe iray. Tsy maintsy tadidinao fa hatramin'ny nanamoriana ny fotoana maharitra ny orinasa, dia hanana ny fomba fiasa manokana. Mba hanafainganana ny dingana rehetra azonao atao ihany koa Mitadiava fandehanana an-dahatsary ao Dubai.
Ny mpitantana ny mpiasan'ny GUN dia mampita ny fahombiazanao manokana
Eny, manantena mandrakariva ireo mpitantana ny ho lasa mpanakona. Mandritra ny manodidina anao olona tsara toetra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny influencer hafa dia tena manampy anao hahatratra ny fahombiazanao. Ny olana lehibe indrindra dia ny anao antony manosika fahombiazana sy fahasambarana. Tsy hainao mihitsy ny hihazona ny fifandanjana eo amin'ny fiainana amin'ny ambaratonga tsara. Amin'ny lafiny ratsy, tsy ny tompon'andraikitra rehetra ao Dubai dia mety ho Tapa-kevitra ny hanao asa ho an'ny CEO. Ny olona sasany miasa efa ela miaraka amin'ny ekipa mpitsabo. Ary lafo be izy ireo. Satria io karazana toetra io Mampidina ny kalitaon'ny mpiasa ao aminao.
Satria nanomboka hiara-miasa amin'ireo olona manana toe-tsaina ratsy ianao. Mazava ho azy fa tsy manao resaka ao anatin'ny ora maro Sarotra aminao ny miasa. Saingy amin'ny maha-mpitantana anao ao Dubai, dia mila manentana anjaranao ianao ary manana ny anjaranao. Mazava ho azy fa hisy fiantraikany izany ny mety hiseho amin'ny orinasa. Manangona tatitra tsara miaraka amin'ny ekipa iray. Asao izy ireo hampiakatra etika sy ezaka momba ny asa satria zava-dehibe tokoa izany. Azo antoka, raha manao ny entimodinao ianao. Ny ekipa na ny departemanta eo ambany fanaraha-maso anao. Hanangana anao ary tsy hampidina anao ambanin-javatra.
Misy be ny misy asa any Dubai sy Abou Dhabi. Afaka manampy anao hiatrika asa be dia be ny fahazoana mitarika. Ny fitantanana ny fahombiazanao manokana dia marina amin'ny fanerena ny olona iray hanakarama anao.
Famaranana ny asa fitantanana any Dubai
Ok, andao hamita izany, ny asa fitantanana any Dubai. Tsy mora izany. Ny ankamaroan'ireo mpikatsaka asa dia mila manana ny fahaiza-manao tsara. ary ho an'ny C-Level asa toy ny Operation manager, CEO, ny toerana misy ny fitantanana. Tena sarotra ny dinidinika. Ary ny fanovana tontolo iainana dia tsy mora mihitsy izany. Na ny fanovana firenena iray aza dia mety ho asa mafy be fa tsy nahomby tamin'ny fomba tsara ianao. Indrindra avy any Eoropa or Aziatika ho toy ny mitady asa any Moyen-Orient.
Noho izany, tsara kokoa ny manomboka toerana. Ary mandroso tsy miandany ho eo amin'ny toeran'ny manager tengah. Atỳ ho azo antoka kokoa ho anao izany. Mazava ho azy any amin'ireo orinasa toa an'i Google sy Facebook. Amin'ny ankapobeny dia aorian'ny fandalovanao ny fizotran'ny dinidinika, ary raha ho ianao voatendry ho amin'ny asa mahafaly toy izany. Hahazo vola be kokoa ianao. Saingy sarotra ny mandeha any, izany no antony mahatonga ny ankamaroan'ny olona mijanona ao hiasa mandra-pahatonga azy ireo.
Saingy ny Orinasa orinasa Dubai Mampirisika expatriates foana. Tianay ny hametrahana anao ho an'ny asa tsara indrindra azo atolotra sy ny asa fitantanana tsara indrindra any Dubai. Izany no antony havaozinay hatrany ny laharanay bilaogy any UAE. Ary ao an-tsaina izany, dia miezaka izahay mba hanampiana anao ho lasa mpiasa faly amin'ny Moyen Orient. Amin'ny lafiny iray, aza adino fa ny orinasa ihany koa Arabia Saodita mpitsoa-ponenana.
Orinasa Dubai ankehitriny manome torolàlana tsara any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Dubai mitsotra. Noho izany, ao an-tsaina, dia afaka mahazo mpitarika ianao izao, toro-hevitra sy asa any amin'ny United Arab Emirates amin'ny fiteninao.